BREAKING NEWS: Haleelamuun waraana Isaayyaas Dubbii Fide! | Kichuu
Posted on November 22, 2020 by kichuu_admin
#BREAKING NEWS Update Tigraay and Eertiraa
Sadaasa 22/2020 Haleelamuun waraana Isaayyaas Dubbii Fide!
Waraanni Shaabiyaa Kaaba Tigraay adda waraanaa #Raamaa ture birgeediin 3 (loltoota 5000 tahu ) gara Eertiraatti deebi’ee jira.sababni isaa immoo dogoggoraan boombii diroonii irraa darbatameen loltu Eertiraa konkolaataa 3 keessa jiru guutummaa guutuutti dhumuu isatti.ta’us waraana Shaabiyaa kuma hedduun karaa adda addaa ammas waraana kana irratti hirmaachaa jiru.
Waraanni kun utuu baqachaa jiru rukutame waan taheef shira Nafxanyaa tahuu mala jechuun Shaabiyaa biratti dallansuu guddaan uumeera.
#BRAEKING NEWS Odeeffannoo Walloo_waaldiyaatti
Karaa Raayyaatiin miidhaa guddaan waraana Bilxiginnaa irra ga’ee jira. Keesattuu milishaa fi humni Addaa Naannoo Amaaraa kuma lama (2000) caalu kaampii Keessatti TPLF meeshaa waraanaa moortoorii jedhamuun rukkutee jirti. Sababaa kanaaf kanneen madoo tahan yaaluuf hospitaalli waan guuteef manni yaalaa yeroo istaadiyeemi #Waaldiyaatti dhaabbatee jira. Yeroo ammaa kana kanneen dhibba hedduu tahan achitti yaalamaa jiru.
Kanumaan wal-qabatee walitti gaarreffannaan qondaalota Waraanaa federalaa fi naannoo Amaaraa gidduutti jabaataa dhufuu keessa beektonni himan.
•Hayiluu Gonfaa Erga Magaalaa Amboo mandheeffatee basaastota bobbaasee baatii lama guuteera. Hayiluun Gamoo Abbabach Mattaaffariyaa keessa mandheeffatee kan jiru yoo ta’u yeroo ammaa kana basaastota Ambotti bobbaasee Qeerroo Amboo hidhaatti guursisaa jira.
•Geetuu Daandeessaa tika Federaalaati. Eegduu lamaan eegamee Magaalaa Amboo keessa deemee Qeerroo Adamsee hiisisuu erga eegalee baatii lama guutee jira.
•Biraanuu Nuurasaa Namoota Muraasa Maqaa ABO Tokkoomeetiin ijaaruun leenjii tikaa erga fudhatanii data Qeerroo sabboontotaa fi Miseensota ABO sassaabuun tikaaf least namootaa kennuu erga eegalee waggaa tokko darbeera.
#Guutummaa Qeerroo Amboo Mana Hidhaa jiranii fi yeroo ammaa hidhamuuf barbaadamaa jiran maqaa fi suura sassaabee kan tikaaf kennu miseensota ABO-Tokkoomee (ABO Soodareeti). Gareen kun General Hayiluu Gonfaatin Kan ijaaraman yoo ta’u yeroo ammaa kana Qeerroo fi Qarree Amboo irratti duula hidhaa jumlaan geggeessaa jiru.
marfataa lamaffaa garaa Hospitaala geessuu fermataa bajaajii fulduura Suuqii qaba ijoollee Oromoo antumaa qaban baasaasa ollaa Jedhamee himataamee jira kan hafee immoo anu si barreessa obsii na eegii